Shiinaha Oo Samaystay Boqorka Dagaalka Dhulka Gaadhi Loogu Magacdaray.
Sunday November 18, 2018 - 01:36:45 in Wararka by Halgan News
Ciidamada dalka Shiinaha ayaa gabo gabeeyey samaynta gaadhi dagaal oo noociisu yahay Kaare ama Taangi
, kaas oo awood badan u leh in uu si fudud u burburiyo gawaadhida dhigiisa ah ee Taangiyadda loo yaqaano, waxaana gaadhigan lagu magacaabaa Boqorka Dagaalka Dhulka (Land War King).
Taangigan oo hub kala duwan lagu rakibay ayay sameeyeen ciidamada Cirka ee dalka Shiinuhu, gaar ahaana uguna lagu magacaabo Tip-59 , Waxaana lagu rakibay qori weyn oo dhuuntiisu gaadhayso 30 mm, waxa kale oo ku rakiban gantaalaha loogu talo galay in lagu dilo Taangiyadda iyo qori yar oo nooca daran dooriga u dhaca ah oo dhererkiisu dhan yahay 7.62 mm.
Sergey Suvorov oo ah khabiir dhinaca ciidamada ah una waramaayey website ka News.ro oo uu qormadan kazoo xigtay wargeyska Dawan ayaa sheegay in gaadhigani uu ciidamada Shiinaha ka taageeri doono bad baadada taagniyadooda dagaalka oo uu si adag u difaaci doono, sidoo kalena waxa uu sheegay in uu si fudud u burburin karo Taangiyadda cadowga oo uu meel fog ka dili karo.
Taangigan cusub ee ay ciidamada Shiinuhu soo saareen ayaa lamid ah taangiga ay dhowaan soo saareen ciidamada Ruushku ee lagu magacaabo T-72 , kaas oo isna awood u leh in uu Taangiyadda kale meel fog ka burburiyo, dhulkana soo dhigi karo diyaaraddaha qaarkood.